Maxay ahaayeen duufaannadii ugu waxyeellada badnaa taariikhda? | Saadaasha Shabakadda
ka duufaan Iyagu waa dhacdooyinka saadaasha hawada ee ugu xooggan uguna awoodda badan ee lagu abuuri karo meeraha. Meere, oo laga arko meel bannaan, waxay na siin doontaa dareen ah inay deggan tahay, laakiin runtu waxay tahay inaysan sidaas ahayn; ugu yaraan, maahan gobollada adduunka qaarkood, sida Mareykanka. Caddaynta tan waxaan haynaa diiwaanada ka haray duufaanadan, kuwaas oo sababi kara waxyeelo weyn, iyo sidoo kale dhimasho.
Hadaad rabto inaad ogaato maxay ahaayeen duufaannadii ugu waxyeellada badnaa taariikhda, Ha moogaanin qodobkaan.
Waqooyiga Ameerika, iyo gaar ahaan Mareykanka, waxay leedahay taariikh muhiim ah oo duufaanno waxyeello geysta, gaar ahaan magaalooyinka sida Mississipi, Oklahoma ama Moore. Waa kuwan qaar ka mid ah:
Tornado regina: sanadkii 1912 dii duufaan xoog leh ayaa saameysay magaalada Saskatchewan, ee Kanada. Waxay qaadatay wax ka yar seddex daqiiqo, laakiin waxay dishay 30 qof waxayna baabi’isay kumanaan guri.
Tri-State Tornado: Maarso 18, 1925, duufaan EF5 ah oo laga sameeyay Missouri (USA). Waxay sii martay Missouri, koonfurta Illinois waxaana lagu waayey Indiana, halkaas oo ay ku dhinteen 695 qof.
Talladega TornadoSanadkii 1932, Degmada Talladega (Alabama) waxay sameysay duufaan 4aad ah oo loo yaqaan 'XNUMX' duufaano waxayna baabi'isay degmada, halkaas oo ay ku dhinteen XNUMX qof.
Oklahoma tornadoes: May 3, 1999 waxay Oklahoma u ahayd maalin naxdin leh. Wadar dhan 76 duufaanno ayaa taabtay maalintaas, oo midkoodna uu ahaa EF5, oo aakhirka u kala qaybin doona magaalada laba qof oo dilay 44 qof.
Joplin duufaan: May 22, 2011 waxay burburisay 20% magaalada Joplin (USA) waxaana ku dhintay 160 marka lagu daro burburka maadiga ah ee aan la soo koobi karin. Waxay ahayd mid ka mid ah kuwii ugu burburka badnaa taariikhda dhow ee Mareykanka.
Duufaannada waa ifafaalooyin waxyeello u geysan kara, laakiin waxaa jira qaar iyaga aad ugu soo jiitay oo raba inay ugu dhowaadaan sida ugu macquulsan ee ay si qoto dheer u bartaan: iyagu dabeylaha duufaanka (ama la ugaarsado).
Shakhsi ahaan, waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo biiro, xitaa haddii ay ahaan laheyd hal mar oo keliya nolosha. Laakiin haye, waqtigan la joogo waa riyo la fuliyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Maxay ahaayeen duufaannadii ugu waxyeellada badnaa taariikhda?